» कति बाठो कोच राजु लामा !
कति बाठो कोच राजु लामा !
८ पुष २०७८, बिहीबार १२:१६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ८ पुस । द भोईस किड्स नेपालका चर्चित कोच गायक राजु लामा यतिखेर चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा छन् । कोच राजुले लिएका केही निर्णयहरुका कारण उनले आलोचना पनि खेपेका छन् । तर केही दर्शकहरुले भने कोच राजुको बठ्याँईको तारिफ गरेका छन् । कोच राजु यति बाठा छन् कि उनी ब्लाईण्ड अडिसनबाट आफुले लिएको कुनै पनि प्रतियोगीले जितेपनि खुशी हुने बाटो अपनाउँछन् । उनको अहिलेको निर्णयहरु हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । हुन त उनले आफ्नो टिमका धुरन्धरहरुलाई नै एउटै टिमबाट ब्याटल भिडाएका छन् तर त्यसबाट थोरै प्रतियोगीलाई घाटा र धेरैलाई नाफा भएको छ । कोच राजुको टिममा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल ५ जना र अन्य दमदार ७ जना प्रतियोगीहरु थिए । ती मध्ये कतिपयलाई राम्रै गाउनेसँग भिडाएर कोच राजुले दर्शक श्रोताबाट आलोचना खेपेका छन् । दोस्रो ब्याटलमा त झन राजुको बारेमा दर्शकहरुले विरोध नै गरे । तर राजु भने आफ्नो ब्लाईण्ड अडिसनबाट छानिएका हिराहरुलाई अरुकै टिमबाट भएपनि जिताउने सोचमा रहेको देखिन्छ । उनी कसरी बाठो काम गरिरहेका छन् ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ ।
कोच राजुको टिमबाट पहिलो ब्याटलमा आर्यतारा रिजाल, नोरिन राई र परिबुङ राईले ब्याटल भिडेका थिए । जसबाट उनले आर्यतारालाई रोजेपछि नोरीन र परिबुङ शोबाट बाहिरिए । चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल नोरीनलाई नछानेपछि कोच राजुको आलोचना सुरु भयो तर उनले गायकीका आधारमा फाईनलमा पुग्ने सम्भावना महशुस गर्दै आर्यतारालाई रोजेका थिए । नोरीन र परिबुङलाई पनि स्टिल हुने सम्भावना थियो तर भएन । त्यसपछि दोस्रो ब्याटलमा त दर्शकहरुका अनुसार कोच राजुले हदै पार गरे । उनले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल सुप्रिम मल्ल ठकुरी र पेमा दिछेन तामाङसँग क्षितिज पौडेललाई एकैसाथ भिडाए । ब्याटलपछि उनले सुप्रिमलाई रोजे जसका कारण दर्शकहरुले दमदार प्रतियोगीहरुलाई एकै ठाउँमा भिडाएर कोच राजुले गल्ती गरेको बताए । तर कोच राजुको बठ्याँईले उनको टिमबाट पेमा र क्षितिज दुबै जना लाईभमा पुगे । उनीहरु स्टिल हुन्छन् भन्ने थाहा पाएरै कोच राजुले एकैसाथ भिडाएको चर्चा अहिले चलिरहेको छ । उनको टिममा सुप्रिम आएता पनि उनका बाँकी दुई हिराहरु शोबाट बाहिरिएनन् । उनीहरुलाई तिनै जना कोचहरुले स्टिल गरे । जसका कारण क्षितिज कोच मिलनको टिममा र पेमा कोच प्रविशाको टिममा छनौट भए । कोच प्रविशा र कोच मिलनको टिममा केही कम प्रतिस्पर्धा भएकोले यी प्रतियोगीहरु फाईनलसम्मै पुग्ने सम्भावना बढेको छ । जसका कारण कोच राजुको टिममा नरहेपनि उनले छानेका प्रतियोगीहरु नै फाईनलमा पुग्ने सम्भावना निक्कै बढेको छ ।
तेस्रो ब्याटलमा पनि कोच राजुले फेरि चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल ईप्सिचुङ चाम्लिङ र हितेश राउतसँग प्राप्ति निरौलाई ब्याटल भिडाए । जसमा उनले ईप्सिलाई छाने र हितेशालाई कोच प्रमोद र कोच मिलनले स्टिल गरे । हितेशले कोच मिलनलाई छानेपछि अब हितेशपनि फाईनलको दाबेदार बनेका छन् । हितेश कोच मिलनको टिममा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल एकमात्र प्रतियोगी भएका छन् । यसमा पनि कोच राजुले निक्कै बठ्याँईका साथ आफ्नो अर्का प्रतियोगीलाई फाईनलको दाबेदार बनाएका छन् । यी तिनै ब्याटलका आधारमा कोच राजुले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल आफ्ना ५ जना प्रतियोगीहरुमध्ये ४ जनालाई लाईभ राउण्डमा प्रवेश गराएका छन् । यसबाट उनी निक्कै बाठो कोचका रुपमा देखिएका छन् । हुन त उनको आफ्नै टिमबाट जित होला वा नहोला तर उनले सुरुमा छानेकै प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्नसक्ने सम्भावना निक्कै बढेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–